नेकपा र फोरम गठबन्धन कसरी सम्भव भयो ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 Headline2 Main News National Photo News Special News राजनीति नेकपा र फोरम गठबन्धन कसरी सम्भव भयो ?
काठमाडौं, १६ जेष्ठ । प्रदेश नम्बर २ मा फोरम नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फिर्ता लियो ।
अचानक जस्तै गरी आएको यो निर्णयपछि थरिथरिका अनुमान भए । फोरम र राजपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको तथा कुनै खटपट पनि नदेखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई नेकपाको समर्थन फिर्ता हुनुको कारण फोरमको सरकार ढाल्न र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर आफ्नै सरकार बनाउनु हुनसक्ने अनुमान रचर्चा गरियो ।
समर्थन फिर्ता लिएको २४ घण्टा नबित्दै फेरि त्यस्तै अचानक जस्तैगरी फोरम नेपालले पनि संघीय सरकारमा सहभागी हुने सम्झौतामा नेकपाका दुवै अध्यक्षसँग सम्झौता गर्यो । जसले बाहिर मात्र होइन, फोरम नेपालभित्रै पनि तरंग पैदा गरेको थियो ।
अचानक सतहमा आएका यी घटनासँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ ।
तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रमा सरकार गठन भएसँगै सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेको फोरम मन्त्रालयको बाँडफाँडमा असन्तुष्ट भएर पछि हटेको थियो । तर कम्युनिष्ट पार्टीसँग निकट र राजपाको लाइनसँग असहमत रहेका उपेन्द्र यादवका लागि एमाले माओवादी र अहिलेको नेकपासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुको विकल्प थिएन ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त यादवलाई पार्टी एकतामै सामेल हुन आग्रह गर्दै आएको थियो । पार्टी एकतामा सामेल गराउन नसकेपनि फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन भने उनलाई सफलता मिलेको छ ।
केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गर्ने समझदारी गरेसँगै नेकपाले प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु झट्ट हेर्दा अनौठो जस्तो देखिएपनि अन्तर्यमा यो आपसी तालमेलमै भएको विश्लेषण गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् ।
फोरम सरकारमा जाने विषयमा प्रचण्ड निवासमा थुप्रै पटक भेटघाट र छलफल भएको थियो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै प्रचण्डलाई भेट्न पटक पटक खुमलटार पुग्ने गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपनि फोरम र नेकपाबीचको सम्बन्ध बिग्रिसकेको थिएन । यसबीचमा प्रचण्डसँग यादवले पटकपटक छलफल गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा फोरमले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर समर्थन गरेसँगै सरकारमा सहभागि हुने वातावरण बनेको नेताहरुले बताएको छन् ।
संविधान संसोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सरकारमा जाने सहमति गरेको फोरमले केन्द्रमा दुई मन्त्रालय पाउने भएको छ । कुन कुन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भन्नेबारे अहिले नै निर्णय भइनसकेको फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्रालयका विषयमा अहिले नै सहमति भइसकेको छैन उनले भने, ‘केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको छ । अब छलफलपछि मन्त्रालयको टुंगो लगाउँदै हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ ।
अहिले सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छ । यी दुबै मन्त्रालय फोरमलाई दिन नेकपा तयार छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसअघि नै उपप्रधान सहित परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेकाले त्यो भन्दा तलको वरियतामा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने टुँगो लागेको छैन ।
प्रदेश २ मा नयाँ समिकरणको सम्भावना
प्रदेश नम्बर २ मा फोरम नेतृत्वमा फोरम र राजपाको गठबन्धनको सरकार छ । नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि फोरम र राजपासँग बहुमत कायमै छ । तर केन्द्रीय स्तरको सहमतिले प्रदेश नम्बर २ मा पनि फोरम र नेकपाको मिलिजुली सरकार बन्ने र राजपा सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको छ ।
पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक परिवर्तनलाई राजपाले आश्चर्यको रुपमा हेरेको वताएको छ । २०६२÷०६३ को मधेस आन्दोलन र ०७२÷०७३ तथा अन्य विभिन्न चरणमा भएको मधेस आन्दोलनका माग अझैसम्म सम्बोधन नभइरहेको अवस्थामा फोरम सबै माग लत्याउँदै सरकारमा जानुले मधेस र मधेसी आश्चर्यचकित बनेको राजपाका महासचिव केशव झाले बताए ।
सत्ताकोलागि मधेसी नागरिकलाई फोरमले भर्याङ् बनाउने काम मात्रै गरेको भन्दै उनले मधेस र मधेसीको हक अधिकार दिलाउन संघर्ष अझै यथावत रहेको पनि बताए ।
प्रदेश २ को सरकार अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले राजपा अहिले नै सरकार छाडेर बाहिरिने मुडमा नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । फोरमले सरकारबाट बाहिर पठाउन खोजे आफूहरु सौहाद्र्धपूर्ण तवरले बाहिरिन तयार रहेको र कसैको बाधक बनेर बस्ने चाहना पनि नभएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो घटनाक्रमबारे राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइने पनि महासचिव झाले बताए ।
यो घटनाले अब राजनीतिक धु्रवीकरणलाई अझ पेचिलो बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । अब नेकपा र फोरम एकातिर तथा कांग्रेस र राजपा एकातिर हुने सम्भावना बलियो बनेको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने राप्रपाले एउटा कित्ता क्लियर गर्नुपर्नेछ ।
नयाँशक्ति र विवेकशील साझा राजनीतिको तेस्रो धारका रुपमा रहिरहन सक्छन् । त्यसो त उनीहरुसँग कुनै एक मुख्य धारमा समावेश हुनसक्ने अधिकार पनि सुरक्षित छँदैछ ।
#Headline1 #Headline2 #Main News #National #Photo News #Special News #राजनीति